omaly alatsinainy ny avy eo anivon’ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka notarihin’ny minisitry ny filaminam-bahoaka, ny Contrôleur General de Police Roger Rafanomezantsoa sy ny mpiara-miasa aminy. Natsidika teo ny fanatanterahana ny tetikasa «Quick win» na ny fahombiazana haingana eo anivon’ny polisim-pirenena. Tetikasa mamaritra ny asa maika anaty fe-potoana fohy sy hita maso ary azo tsapain-tanana. Vaindohan-draharaha ny ezaka ny fanamorana ny fivezivezena eny an-dalambe. Eo koa ny fisorohana ny fandikan-dalàna ary ny fanenjehana ireo heloka rehetra amin’ny fandikan-dalàna. Nojerena manokana tamin’ity fotoana ity moa ny fanamorana ny fivezivezena eny an-dalambe. Amin’izao fiomanana amin’ny fetin’ny krismasy sy taom-baovao izao izay mampikolay amin’ny fitohanana, handray ny andraikiny ny polisim-pirenena amin’ny fampisosana ny fifamoivoizana. Ny fihaonan-dalana miteraka tohamboivoy izay fidirana avy any ivelan’ny renivohitra dia ametrahana polisy mandray andraikitra avokoa. Misy amin’ireo lalana tahaka ny avy any Tanjombato koa no hatao laharan-droa.